दशै हो कि दशा ! (लघुकथा) – मझेरी डट कम
“बुबा, मलाई एक जोडी टिसर्ट र पेन्ट त नभै हुँदै हुँदैन । मैले त भन्दिएको छु नि ।” माईली छोरीले दशैंको डिमाण्ड तेर्स्याइन ।
“मलाई त टिसर्ट र पैण्टले मात्र पुग्दैन । त्यसमा मिल्ने एक जोडी स्याण्डल पनि चाहिन्छ ।” ठूली कान्छीको यो डिमाण्ड हो यो ।
कान्छी छोरीको डिमाण्ड भने लुगा-फाटातिर नभएर दशैंमा खसी ल्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो । उनी भन्दै थिइन – “मामु बाबालाई यसपटक त खसी ल्याउनु पर्छ भन्नुहोस् है । पल्लाघरमा त अस्ति नै कति ठूलो खसी ल्याईसके । दशैंमा मार हान्ने अरे । हामी पनि मार हान्नु पर्छ । दशैंमा मार त हान्नै पर्छ नत्र त दशैं आए जस्तै हुँदो रहेनछ । पोहोरसाल मार नहान्दा दशैं आए झैं लागेन ।”
“मासु त अरुकहाँबाट ल्याएर खाए पनि हुन्छ तर लुगाफाटा चाहिं ल्याउनै पर्छ । नत्र म त टिकै लगाउँदिन बरु त ।” भित्रैबाट कान्छो चिच्यायो ।
“तँलाई खालि लुगा मात्रै ! अस्ति मात्र आमाले सर्ट पैण्ट ल्याइदिएको होइन ।” ठूली कान्छीले भाइको कुरामा असहमतिको पोको फुकाई ।
श्रीमती सुधाको डिमाण्ड पनि उतिकै चर्को थियो, “सुन्नुहोस है प्रभाका बाबा मैले भन्दिएकी छु नि । यतिका सालपछि ज्वाईं आउने । दशैं त राम्रै गरी मान्नु पर्छ । कुटुम्बको ईज्जत पनि त राख्नै पर्यो । रिनपान गरेरै भए पनि एउटा खसी त ल्याउनै पर्छ । केटाकेटी पनि अस्तिदेखि नै खसी-खसी भनिरहेका छन । खसी पनि ठूलै चाहिन्छ । पाहुना-पाच्छा पनि थुप्रै आउलान् । भान्जा-भान्जीहरू छन् । कान्छी नानीका छोरीहरू पनि यसपाली त मामल गइन्छ, दशैंमा मामल नगएको पनि धेरै भयो भन्दै थिए अरे । ठूल्दिदीका सन्तानै आउँछन नजिकै छन ।”
सबैका डिमाण्ड सुनेर प्रभाकर लखतरान पर्छन । एउटा सानो जागीर । खाने मुख त्यति धेरै । जावो माष्टरी जागीर, त्यसमा पनि निमाविको कति नै हुन्छ र ! जागीरले त महिना मर्नै भ्याउँदन । कहिलेकही त पछिल्लो महिनाको तलब पनि अघिल्लै महिनामै सिद्धिन्थ्यो । झन यसपाली त सरकार बन्न सकेकै थिएन । सरकार बन्न नसक्दा आन्तरिक खिचातानीले गर्दा बजेट नआउँदा दशैं पेस्की त परै जाओस तलबै पनि पाउने अवस्था थिएन । उनी असमन्जसमा पर्दै सोच्न थाल्छन, “यो दशैं हो कि दशा?”
1 thought on “दशै हो कि दशा ! (लघुकथा)”
nandalal.acharya October 27, 2010 at 1:54 pm